AB 392 को समर्थनमा क्यालिफोर्निया राज्य क्यापिटलमा एक जुलुस।
क्यालिफोर्निया घातक शक्ति को उपयोग सीमित गर्न; पुलिस संगठन अझै विरोध
जुलाई 10, 2019 जुलाई 10, 2019 रोबर्ट मार्टिन (CN स्टाफ) क्यालिफोर्निया, विशेष समाचार, समाचार लेख, राजनीति
क्यालिफोर्निया पुलिस बल प्रयोग को बारे मा देश मा एक कडा कानून को अपनाने देखि एक प्रक्रियागत अवरोध छ। सोमबार राज्य सिनेट -34 3--XNUMX खाली गरेपछि, असेंबली बिल 392 सरकारलाई टाउको Gavin Newsomको डेस्क। विधेयक अन्तर्गत, पुलिस अधिकारीहरूले घातक शक्तिको प्रयोगलाई जायज ठहराएको मापदण्डलाई माथि उचालिनेछ जब अफिसरहरूले "आवश्यक" भएमा मात्र यो "व्यावहारिक" देखिन्छ। यो विधेयक नागरिक अधिकार संगठनहरू र पुलिस युनियनहरू बीच एक वर्षको कडा संघर्षको सम्झौताको प्रतिबिम्ब थियो। धेरै पुलिस सations्गठनहरूको विपक्षमा छ।
गेभिन न्यूजम क्यालिफोर्नियाको th० औं र वर्तमान गभर्नर हुन्। यस अघि उनले लेफ्टिनेन्ट गभर्नर र स्यान फ्रान्सिस्कोको मेयरको रूपमा सेवा गरेका थिए। उहाँ आफ्नो पहिलो कार्यकालको सेवा दिँदै हुनुहुन्छ, र नोभेम्बर २०१ in मा निर्वाचित हुनुभयो।
मार्च 2018 मा, स्याक्रमेन्टो पुलिसले स्टेफन क्लार्कलाई गोली हानी हत्या गरे, उसलाई एक संदिग्ध कार चोर हो भन्ने विश्वास गर्दै, र बन्दुकको लागि आफ्नो सेल फोन गलत गर्दै। क्लार्कसँग बन्दुक छ भन्ने डरले जिल्ला अधिवक्ताको कार्यालयले ती अधिकारीहरुलाई चार्ज नगर्न निर्णय गरे। तसर्थ, खतराको “व्यावहारिक डर” अवस्थित हुँदा पुलिसले “कानूनी व्यवहार” गर्‍यो र गोलीबारी उचित ठहरियो। क्लार्कको मृत्यु, र यसको कानुनी जवाफले आक्रोशित भयो र एक वर्ष पछि उसको परिवारले क्यापिटलमा परिवर्तनको मागको लागि अघि बढ्यो।
नयाँ विधेयकले पुलिसलाई घातक शक्ति प्रयोग गर्न मात्र अनुमति दिन्छ “अफिसरले यथोचित विश्वास गर्दछ, परिस्थितिको पूर्णताका आधारमा, घातक शक्ति मृत्यु वा गम्भीर शारीरिक चोटको आसन्न खतराबाट बचाउन आवश्यक छ।"तसर्थ, एक पुलिस अफिसरले तर्क गर्न सक्नु पर्थ्यो कि त्यहाँ वास्तविक, निकट खतरा छ, उनीसँग व्यावहारिक डर भएको हुन सक्छ कि त्यहाँ त्यस्तो हुन सक्छ। विधेयकमा घातक शक्ति प्रयोग गर्नु अघि र पछाडि पनि अफिसरको आचरणको मूल्या requires्कन आवश्यक हुन्छ, र निर्धारण प्रविधिको प्रयास गरिएको थियो कि भनेर निर्धारण।
शर्ली वेबर क्यालिफोर्निया राज्य विधानसभा को एक सदस्य हो, th th औं जिल्ला को प्रतिनिधित्व। उनले पहिले सैन डिएगो शिक्षा बोर्डमा काम गरेकी थिइन। वेबर आफ्नो चौथो कार्यकालमा छन्, र लस एन्जलसको दक्षिणमा असेंब्लीमा निर्वाचित पहिलो अफ्रिकी अमेरिकी थिए।
एबी 392 XNUMX२ लाई कानून प्रवर्तन समूह र प्रहरी युनियनहरूले कडाईका साथ विरोध गरेका थिए, र उनीहरूलाई खुशी पार्न महत्वपूर्ण संशोधन गरिएको थियो। बिलको मौलिक संस्करणमा "आवश्यक" के हो भन्नेको उद्देश्य परिभाषा समावेश थियो, र ती कडा मानक पूरा गर्न असफल भएकोमा अधिकारीहरूलाई फौजदारी उत्तरदायी हुने थियो। ती प्रावधानहरू हटाइयो, र पुलिस लाबीहरूले विधेयकको विरोध खारेज गरे। अभियोजक र निर्णायकले यसको सट्टा मानक पूरा भयो कि हुँदैन भनेर निर्धारित गर्न सक्षम हुनेछ। अझै, राज्य भर मा धेरै पुलिस संघहरु आयोजित र विधेयक को विरोध गरीरहेका छन्।
यदि राज्यहरू प्रजातन्त्र, एबी 392 XNUMX२, र मुख्य प्रायोजकको प्रयोगशाला हुन् भने, विधानसभा महिला शर्ली वेबर (D-सैन डिएगो), क्यालिफोर्निया कानून प्रवर्तन को यस विवादास्पद क्षेत्र मा एक परीक्षण मामला को रूप मा सेवा गर्न अद्वितीय अवसर दिनेछ। "अन्तमा, मानिसहरू यसमा गम्भीर छन्," वेबरले भने। 'हामी राज्यको सबैभन्दा कठिन समस्याहरू मध्ये लडिरहेका थियौं। यो क्यालिफोर्निया भन्दा राम्रो कसले गर्नुपर्छ? " को ACLU बोर्डमा छ, त्यस्तै सयौं अन्य संगठनहरू, र विधायिका रिपब्लिकनहरू पनि छन्। सेन जोन मउरलाच (आर-कोस्टा मेसा) विश्वास गर्दछ कि बिलले "दुखद र सम्भावित रोकथाम" हुने मृत्युलाई कम गर्नेछ। २०१ California देखि क्यालिफोर्नियामा शक्ति घटनाहरूको प्रयोगले करिब २०% घटेको छ। यो आशा छ कि एबी 392 XNUMX२ ले ती संख्याहरू तल अझ तल ल्याउने छ।
एबी 392 कालो जीवन बिताउँछ BLM क्यालिफोर्निया सांप्रदायिक समाचार घातक गोलीबारी Gavin Newsom जोन मउरलाच प्रहरी शर्ली वेबर स्टेफन क्लार्क बल प्रयोग
कस्तो प्रकारको कास्परस्की एन्टिभाइरस कुञ्जी तपाईंको लागि सहि छ?
टोस्टेड फ्लोर मार्केट द्रुत रूपमा बढ्दैछ